Myelomatosis - Ọrịa kansa ọkpụkpụ nwere ike ịdị mgbagwoju anya.
Otutu myeloma (nke a makwaara dika otutu myeloma) bu udiri oria ojoo ojoo ojoo. Otutu myeloma na-abụkarị ihe achọpụtara na Ndị tozuru etozu, ihe dị ka afọ 65. Ọ bụ ọrịa kansa nke na-emetụta ụmị ọkpụkpụ - ọ bụghị anụ ahụ siri ike na ọkpụkpụ.
- Ọtụtụ mgbe na-emetụta ọtụtụ ebe
Isdị a nke ọrịa kansa ọkpụkpụ dị njọ na-achọpụtakarị n'ihi na ọ nwere ike ịkpata mgbu. A na-ahụkarị ya nyocha ọbara, ule mmamịrị, ụzarị ọkụ na onyonyo - yana biopsy ebe ọ dị mkpa. Dị ka aha Bekee ya, otutu myeloma, na-egosi, ọ na-emetụtakarị ọtụtụ ụkwụ. Ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ na-emetụta naanị otu ọkpụkpụ, a na-akpọ nke a plasmacytoma. Ndị ọrịa kansa a na-enwekarị ọtụtụ mgbaàmà. Tinyere ihe ndị ọzọ, mgbatị ụkwụ na-aga n'ihu, enwere ike ịda mba, nsogbu akụrụ nwere ike, usoro ọgụ na-adịghị ike, adịghị ike na ọnọdụ uche dị mgbagwoju anya. Ọ dị mkpa ka ndị nwere ọtụtụ myeloma nọrọ na mmiri ka ha wee gbochie nsogbu akụrụ ọzọ.
- Ọgwụgwọ nwere ike isi ike
Ọgwụgwọ nke myeloma chọrọ ma sie ike. N'ime ihe ndị ọzọ, ọgwụgwọ ọgwụ, ịwa ahụ, ọgwụ na ọgwụgwọ radieshon na-eji ọgwụgwọ myeloma. Ọnọdụ ahụ enweghị ike ịgwọ ya n'oge a, mana ị nwere ike inye aka belata mbibi. Enwekwu ọganihu n'oge na-adịbeghị anya azuokokoosisi ọgwụ, a na-atụkwa anya na ọgwụgwọ ahụ nwere ike ịbanye na nyocha ọzọ na mpaghara a.